December 27, 2021 F.G 0
Degmadda Dharkenleey ayaa ku guuleysatay Koobka Kubbadda cagta degmooyinka iyo deegaanada G.Banaadir 2021, kadib cayaar kulul oo Garoonka En.Yariisow kula yeelatay Degmada Warta nabadda ee Gobolkani Banaadir. Labada dhinac ayaaa soo bandhigay cayaar la wada jeclaystay oo ay usoo daawasha tageen kumannaan ka mid ah dad cayaaraha xiiseeya,waxaana intii cayaartu socotay ay labada dhinac Abuurreen fursado goolal loo filan karay. Labada Gool haye ayaa sidoo kale bad-baadiyay fursado, waxaa isku dayo macquul ah sameeyay weerar yahannada labada kooxood iyo xidigaha khadka dhexe. Balse cayayarta ayaa ku dhammaaatay barbarro goolal la’aan ah oo labada dhinac wey is mari waayeen,taasi oo keentay in loo baahdo in lagu kala saaro gool ku laad ama Rigoore yaal. Degmooyinka Dharkeenley iyo Warta nabadda ayaa tuurtay min Todobo gool ku laad, waxaana Degmada Dharkeenlay ay shabaqa ku hubsatay 6 darbo, halki dhiggeeda Warta Nabaddana ay iska khasaarisay labo gool ku laad,taasi oo ka dhigan in 7-6 farqi ah ay guushu ku raacday degmada Dharkeenlay oo ka mid ahayd naadiyada sida weyn loogu saadaalinayay koobka.
October 25, 2021 F.G 0
Real Madrid ayaa mar kale cadaadis saartay tababaraha Barcelona Ronald Koeman markii David Alaba uu dhaliyay gool cajiib ah oo ka caawiyay inay 2-1 kaga badiyaan El Clásico ciyaar ka dhacday Camp Nou Axadii. Labadii darbo ee Alaba ayaa Madrid inta badan ciyaarta ku jirtay bilawgii ilaa dhammaad, iyadoo Lucas Vázquez uu laba jeer sameeyay waqtiga dhaawaca ka hor inta uusan Sergio Agüero goolkiisii ​​ugu horreeyay u dhalin Barcelona oo ilbiriqsiyo ka harsan yihiin. Barça ayaa haatan lumisay Classic Classic ah markii afaraad oo xiriir ah markii ugu horeysay tan iyo 1965 waxayna weli ku jirtaa kaalinta sideedaad ee La Liga, iyadoo shan dhibcood ka dambeysa Madrid, oo ku soo laabatay hogaanka horyaalka. Ka dib markii ay garaaceen Valencia oo ay ku guuleysteen kulan muhiim ah oo Champions League ah oo ay la ciyaareen Dynamo Kiev usbuucan, waxay ka dhigan tahay dib u dhac kale oo Barça iyo Koeman ah, kuwaas oo mar kale mustaqbalkooda la hubin doono. Dhanka kale, Madrid, waxay u aragtaa soo kabashadooda inay sii xoogeysaneyso, ka dib markii ay taageertay guushii [Sii aqri]
October 24, 2021 F.G 0
Ciyaartii xiisaha lahayd ee garoonka Old Trafford ku dhexmartay kooxaha Manchester United iyo Liverpool ayaa gelinkii hore ee ciyaarta waxaa lagu kala nastay 4 iyo 0 ay ku gacan sarraysay kooxda Liverpool. Difaaca Manchester United ayaa isku dhexyaacay ka dib markii Naby Keita uu Liverpool u daahfuray goolka koowaad halka Diago Jota uu u labeeyey. Labada goo lee kale ayaa waxaa shabaqa ku hubsaday Maxamed Saalax. Gelinkii dambe ee ciyaarta ayaa goolkii 5-aad waxaa Liverpool u dhaliyey Maxamed Saalax oo caawa noqday ciyaartooygii ugu horreeyey ee Liverpool ka tirsan ee Old Trafford saddex gool ku dhaliya tan iyo sannadkii 1996-dii. Gool uu Manchester United u dhaliyey Christiano Ronaldo ayaa la diiday ka dib markii muuqaalka garsooraha caawiya uu sheegay in uu garab dhaaf ahaa. Paul Pogba ayaa la siiyey karaka guduudan ka dib markii uu khalad ku galay ciyaaryahay Nabby Keita.
Cristiano Ronaldo Oo Digiin Adag U Diray Tababarahiisa Markii Uu Kaydka Dhigay Kulankii Everton.
Xiddiga Man United ee Cristiano Ronaldo ayaa tababarihiisa koxoda ee Ole Gunnar Solskjaer u sheegay in uu doonayo in uu ciyaaro kulan kasta oo horyaalka premier League xilli ciyaareedkan. Xiddiga reer Portugal ayaa fariintan u diray tababarihiisa kadib markii uu kaydka dhigay kulankii Everton ee horyaalka premier League ee ka hor fasaxii xulalka. ilo wareedyo ku dhaw xiddiga ayaa sheegaya in uu aad uga niyad jabsanyahay in kaydka la dhigay kulankii Everton waliba uu doonayo in uu ciyaaro kulan kasta oo horyaalka ah. Ilo wareedyada ayaa sheegay in uu Cristiano Ronaldo tababarihiisa u sheegay”Taam ayaan u ahay in aan ciyaaro kuna bilowdo kulan kasta oo premier League ah”. Cristiano ayaa ku soo labanaya Man United kadib markii uu 4 gool soo dhaliyay kulamadii waajibaadka xulka qarankiisa Portugal kuna jirto saddexley uu u dhaliyay xulkiisa kulankii Luxembourg.
Saddex ciyaartooy oo ka tirsan xulka qaranka ee Jabuuti ayaa magangelyo ka codsaday dalka Faransiiska halkaas oo muddo toddobaad ah ay ku sugnaayeen garoonka diyaaradaha ee Paris. Mid kamid ah ciyaartooydan ayaa loo ogolaaday in uu ka baxo garoonka, Nasrudin Cabdi Abtidoon ayaa ka baxay garoonka Orly ee Paris kadib markii uu ku guuldareystay in uu raaco diyaarad ku wajahneyd Morocco halkaas oo ay kula ballansanaayeen xulka qaranka Niger xilli ay socotay ciyaaraha isreeb reebka Koobka Adduunka. Horraantii bishan ayay aheyd markii xulka qaranka Algeria ay 8-0 kaga badiyeen Djibouti. Ciyaartooyda xulka qaranka Jabuuti ayaa sii maray Faransiiska si ay u gaaraan Morocco maadama Algeria ay xiriirka diblumaasiyeed u jartay dalalka ku yaalla waqooyiga Afrika, waxaana adkeyd in loo safro Morocco. Niger waxay ka badisay Jabuuti, waxaana Jabuuti xilliggaas guri u ahaa Morocco maadamada xiriirka kubadda cagta adduunka uu sheegay in Jabuuti aysan laheyn garoon u qalabeysan ciyaar caalami ah. Dhawaan ciyaartooyda kala ah Bilal Xasan iyo Abuubakar Cilmi ayay dowladda Faransiiska ku amartay inay isaga baxaan garoonka. Waxaana saddex ciyaartooy la siiyay muddo saacado [Sii aqri]
Wakiilka Paul Pogba Oo Xaqiijiyay In Uu Xiddigu Ka Tagi Karo United & Kooxda Uu Ku Biiri Karo Uu Kashifay
Wakiilka Paul Pogba ee Mino Raiola ayaa sheegay in uu xiddiga reer France Ku laaban karo kooxda Juventus xagaaga dambe. Heshiiska Pogba ee Man United ayaa dhici doona xagaaga dambe sidaas darteed waxa uu heshiis la gali karaa kooxda uu doonayo suuqa January waliba qaab xor ah uga tagi kara kooxda dhamaadka xilli ciyaareedka. Xiddiga reer France ayaa xidhiidh fiican la leh kooxdiisii hore waxana uu Mino Raiola qirtay in uu xiddigu ku laaban karo kooxda Juventus xagaaga dhamaadka xilli ciyaareedka. Mino Raiola oo arintaas ka hadlaya ayaa yidhi”Heshiiska Paul Pogba waxa uu dhici doona xagaaga sidaas darteed waxa aan ka hadli doonaa waxa dhaca”. “Wali Pogba wuu jecelyahay Juventus waxana jirta fursad uu ugu laaban karo kooxdaas laakiin arintaas waxa ay ku xidhantahay qorshaha Juventus”
August 28, 2021 M.Jo 0
Laacibka Kubadda Cagta Cristinano Ronaldo ayaa dib ugu laabanaya horyaalka Ingiriiskaa, waxaana heshiis la gaartay kooxdiisii hore ee Manchester United, iyadoo weeraryahankan caalamiga ah ee reer Portugal uu dib ugu noqonayo garoonka Old Trafford. “Manchester United waxay ku faraxsan tahay inay xaqiijiso in kooxdu ay heshiis la gaartay Juventus, si loogu wareejiyo Cristiano Ronaldo” ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay kooxda Manchester United oo intaas ku daray “Cristiano, oo shan jeer ku guuleystay cabal-marinta Ballon d’Or, wuxuu ilaa hadda ku guuleystay 30 koob oo waaweyn intii uu ku jiray xirfadiisa, kuwaas oo ay ku jiraan shan horyaal oo Champions League ah, afar koob oo FIFA Club World Cup ah, toddoba horyaal oo England, Spain iyo Italy ah, iyo koobka qaramada qaaradda Yurub oo uu dalkiisa Portugal u qaaday.” Manchester United ayaa sidoo kale bayaankeeda ku sheegtay in taageereyaasheedu ay ku farxeen soo noqoshada halyeygoodii hore, kaas oo u dhaliyay 118 gool 292 kulan oo uu u ciyaaray intii u dhexeysay 2003-2009. Ronaldo ayaa khamiistii sheegay inusan dooneyn inuu la sii joogo kooxda Juventus ee [Sii aqri]
R/ Wasaaraha UK oo cambaareeyay falal cunsurimo ah oo lagu kala kacay ciyaartooyda madowga ah
Ra’iisul Wasaaraha UK iyo xiriirka kubadda Cagta Ingiriiska ayaa cambaareeyay falal cunsurinimo ah oo la kula kacay ciyaartooyda kala ah Jadon Sancho, Marcus Rashford iyo Bukayo Saka kadib guuldarradii ay xaley uu xulka Ingiriiska kala kulmay ciyaarta kama dambeysta ee koobka Yurub. Talyaaniga ayaa 3-2 rigooreyaal ah kaga badiyay Ingiriiska. Saddex kamid ah ciyaartooyda Ingiriiska ayaa ku guuldareystay inay dhaliyaan rigoorayaasha. Ra’iisul Wasaare Boris Johnson wuxuu ku tilmaamay cunsurinimada la kula kacay ciyaartooydan mid walaaceeda leh oo laga naxo. “Ciyaartooyda xulka Ingiriiska waxay mudan yihiin in loogu yeero halyeey balse ma ahan in cunsurinimo lagula kaco iyadoo loo maraya baraha bulshada” ayuu yirii Ra’iisul Wasaaraha. Dhanka kale xiriirka kubadda Cagta Ingiriiska ayaa sheegay inay garab taagan yihiin ciyaartooyda dhibaatada loo geystay isla markaana waxay ku baaqeen in tallaabo adag laga qaado dadka suurtagalka ay tahay inay ka dambeeyeen arrintaas. Booliska London waxay sheegeen inay baarayaan falalka cunsurinimada ah ee lagula kacay ciyaartooyda. Waxay sheegeen ‘In aanan loo duul qaadan doonin falalka noocaas ah”
July 6, 2021 M.Jo 0
Xulka Italy ayaa iska xaadiriyay Finalka Euro 2020 kadib guul ay ka gaareen Xulka Spain kulan ka dhacay Garoonka Wembley oo leesla la gaaray rigoorayaal. Qeybta hore ee ciyaarta labada xul ayaa soo bandhigay kubado sare waxana dhoor fursad iska lumiyay xulka Spain kuwaasi oo dhanka baasaska kaga feecanaa dhanka Italy waxana lagu kala nastay goolal la’an. Xulka italy ayaana hogaanka ciyaarta qabtay daqiiqadii 60aad markii xidiga Federico Chiesa uu kubad qurux badan dhex dhigay shaqaba, Spain ayaana heshay goolka bar-baraha Daqiiqadii 80aad Alvaro Morata ayaana kubad dhinaca bidix ka dhigay Goolhayaha Italy kadib markii uu caawan ka helay Daniel Olmo guud ahaan ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 1-1 waxana lagu daray xili dheeraad ah iyadoo 30 daqiiqo ay ku soo dhamaatay goolal la’an. Ugu dambeyntii xulka qaranka Italy ayaa u gudbay filakna Koobka Qaramada Qaarada Yurub ee EURO 2020, kaddib markii rigoorayaal 4-2 uu kaga adkaaday dhigiisa Spain kulankii afar dhammaadka ahaa ee tartankan.
Cabdixakiim Cabdiraxmaan oo ah 44 jir asalkiisu Soomaali yahay ayaa ka mid ah orodyahanada u tartamaya wadanka Maraykanka tartanka Olombikada adduunka oo dhowaan ka furmaya dalka Japan. Cabdirahman waa oradyahankii ugu da’da weynaa ee Mareykan ah ee abid u tartamaka sameeya koox ka socota dalka Maraykanka ciyaaraha Olombikada. “Waxaan ahay 44-jir, waxaanan xubin ka ahay kooxda Olimbikada Mareykanka. Waxaan u maleynayaa inaan ka mid noqon doono dadka ugu da’da weyn tuulada Olimbikada, gaar ahaan dhacdooyinka orodka. Kaliya waxaan matalayaa dhamaan ragga da ‘dhexaadka ah ee banaanka jooga kuwaas oo u maleynaya inaysan tartami karin. ”ayuu yiri Cabdixakiim. Cabdi wuxuu ku dhashay Soomaaliya wuxuu ahaa ilmo yar markii qoyskiisa ay qaxooti ku noqdeen xeryaha qaxootiga. Waxay aakhirkii degeen Arizona oo wuxuu noqday muwaadin Mareykan ah. Waxaan ahay Mareykan Waxaan ku koray halkan, ”ayuu yiri. “Dalkan wuxuu i siiyay wax kasta oo aan nolosha ka doonayay: waxbarasho lacag la’aan ah, shan jeer oo Olombikada ah. Waan u hanweynahay sida Mareykan, waxaan ugu han weynahay sida Soomaalida. Waan ku faraxsanahay labada dal, ”ayuu yiri. “Waxaan u tegey tababaraha [Sii aqri]